Indlela i-PR6 backlink engathinta ngayo isayithi lakho SEO?
Wonke umuntu uyazi ukuthi imithombo engcono kakhulu yokwakhiwa kwezinga eliphezulu ezixhumanisi eziphezulu izizinda eziphezulu ze-PageRank. Basebenzela ukukhulisa ukucinga kwakho injini yokusesha bese uhambisa isikhundla sakho kukhasi lemiphumela yokusesha.
Ngaphambi kokuqala ukwakha iphrofayela ye-backlink, udinga ukucinga uphinde uhlole mayelana ne-PR6, PR7, namanye amasayithi enjini yokusesha. I-PageRank iyinhlangano ebalulekile yesigaba esibonisa igunya lewebhusayithi - equipment appraisals. Isebenza ukukala ukubaluleka kwekhasi lewebhu ngokubala inombolo nekhwalithi yezixhumanisi ezikhomba kuso. Ngamanye amazwi, uhlelo lokubamba oluyinkimbinkimbi olwamukelwe yi-Google ukubeka amasayithi kuwebhu. I-PageRank encane i-zero, kanti iningi eliyishumi liyishumi. Ezinsukwini zethu, i-PageRank ayisebenzisi njengendlela eyodwa yempumelelo yewebhusayithi. Akuqinisekisi ukusezingeni eliphezulu lokusesha, noma ukunyuka kwezimoto.
Nokho, ukuthola ama-backlink kusuka kumasayithi aphezulu we-PR namanje kubalulekile ekuthuthukiseni iphrofayili yakho yokwakha isixhumanisi. I-Google inikezela ngemithombo yewebhu ehloniphekile neyesikhathi eside ekhona nekhasi eliphakeme le-PageRank. Yingakho ukudala i-backlink lapho kuzotshela i-Google mayelana nenani lakho lokuqukethwe. Uma iphrofayela yakho yokuxhumana iqukethe ama-backlink angu-PR6-PR10, uzobeka kwi-Google TOP.
Amasu ukuze uthole ama-backlinks angu-PR6
Khokheni izinkampani zakho zangaphambili zokuncintisana
hhayi webmaster oyedwa kuphela ku-niche yakho ofuna ukudala iphrofayli enhle yokuxhumanisa. Iningi lemithombo ye-TOP ewebhu ku-niche yakho inezimkhankaso zokwakha izixhumanisi ezinamandla futhi ihlale ifuna amathuba amasha wokuxhumanisa. Yikholelwa noma cha, ungazuza kusuka kumakholomu wakho omncintiswano. Benze wonke umsebenzi wokwakha isixhumanisi kuwe. Ngakho-ke, konke okudingayo kungukuthi uphinde uthole ukuncintisana ngokulandelana kwe-RLR.
Udinga ukuqhuba ucwaningo lokuncintisana futhi ubone ukuthi izincintisana zakho eziyinhloko zakha izixhumanisi. Futhi ekugcineni, udinga ukuphindaphinda noma ukuboleka amaqhinga abo kuphela. Ungathintana nemithombo lapho abancintisana bakho bedale izixhumanisi zabo futhi babuze ngamathuba wokwakha isixhumanisi wesizinda sakho.
Indlela yokusebenza nge-skyscraper
Mhlawumbe uzwe ngale ndlela yokwakha yokuxhumanisa ephumelelayo eyenziwe nguchwepheshe onguchwepheshe we-SEO uBrian Dean. Kuyinto elula, kodwa unikeze ama-webmasters ngemiphumela emihle kakhulu.
Okokuqala, udinga ukuqhuba ucwaningo lwe-niche emakethe futhi uthole izihloko ezithandwayo nezixhumene kakhulu noma okuthunyelwe. Khona-ke udinga ukwenza okuqukethwe kwakho okuqukethwe kuphefumulelwe izinto ozifundile. Kodwa-ke, udinga ukugwema ikhophi-ukudlulisa njengoba kuzodlala nawe. Kufanele udale isihloko esiyingqayizivele esekelwe ocwaningweni lwakho. Khona-ke udinga ukufaka isixhumanisi kwenguqulo ye-athikili yakudala ukuze uqinisekise ukuthi abasebenzisi bangakwazi ukuxhuma kucezu lakho lokuqukethwe olusha olusha.
. Noma kunjalo, kunomphumela owodwa omkhulu. Isebenza kangcono kulabo abasenayo kakade okuqukethwe okudinga ukukhuthazwa. Kulesi simo, udinga ukuthembela kumabhilidi amaningi ukuze uthole amathuba okuxhumanisa. Le nqubo ikunika ithuba lokuthola iqembu lamanye amakhasi wewebhu ngokususelwa kumxholo ofanayo owakho onawo izixhumanisi eziningi ezikhomba kubo.